Speak English online course.
အခုပဲ အပြန်အလှန်သင်ယူလေ့ကျင့်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ပါပြီ ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေဖို့ အကူအညီပေးမယ့် ကွန်ပျူတာ Bot နဲ့အတူ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို လေ့ကျင့်နိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပေါင်းများစွာ၊ အသုံးပြုပုံများစွာနဲ့အတူ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ယူရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုသုံးနှုန်းရ မလဲဆိုတာ ပိုမိုနားလည်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အလွယ်တကူမှတ်မိအောင် ကူညီပေးမယ့် ဂိမ်းဆန်ဆန်သင်ခန်းစာများနဲ့အတူ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဝေါဟာရများကို ကျက်မှတ်လိုက်ပါ။ Myanlearn ရဲ့ Speak English online course နဲ့အတူ သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် တိုးတက်လာအောင် လေ့ကျင့်သင်ယူလိုက်ပါ။
နိုင်ငံတကာအရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်စာအုပ်တွေကို မြန်မာဘာသာပြန်ပြီး စာရေးဆရာပေးလိုတဲ့ အဆီအနှစ်ကို အချိန်တိုတိုနဲ့ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်အနှစ်ချုပ်စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနားထောင်ကြမယ်။
မိတ်ဆွေတို့ ရှာနေတဲ့ ဘာသာရပ်၊ အတန်းချိန် တွေနဲ့ ကျောင်း အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်အားလပ်ချိန်အတွင်း တစ်နေရာထဲမှာ မြင်ရဖို့ ဖုန်းလေးပွတ်ပြီး ရှာကြမယ်။
သင်ယူချင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို တစ်ယောက်ချင်း အနီးကပ်သင်ကြားပေးမယ့် ကျူရှင်ဆရာ၊ Guide၊ Private tutor ကို ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အာမခံချက်ရှိတဲ့ MyanLearn Tutor Service မှာရှာကြမယ်။
Study Guides or ​Tutors ဆိုရင်
ဘာသာစကား၊ အတတ်ပညာ၊ ဂီတ၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာရေးကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ကျူရှင်ဆရာ (Private Tutor) တစ်ယောက်ဆိုရင် ကျောင်းသားအသစ်တွေရဖို့ MyanLearn မှာ ဆရာအဖြစ်လျှောက်ကြမယ်။
စာရင်းကိုင်ပညာ၊ ဘာသာစကား၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နှင့် အခြား ကျူရှင်သင်တန်း (Tuition Centers) သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း (Private Schools and Universities) လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက သင့်ကျောင်းရဲ့ သင်တန်းတွေကို ကျောင်းသားအသစ်တွေ မြင်တွေ့စေဖို့ MyanLearn platform မှာ စာရင်းသွင်းကြမယ်။
မိတ်ဆွေတို့ ရှာနေတဲ့ ဘာသာရပ်၊ အတန်းချိန် တွေနဲ့ ကျောင်း အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်အားလပ်ချိန်အတွင်း ဖုန်းလေးပွတ်ရုံနဲ့ တစ်နေရာထဲမှာ မြင်ရမဲ့ MyanLearn mobile app ရှိနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးလောကမှာ နောက်မကျရလေအောင် အခုပဲ ရယူလိုက်ပါ။
MyanLearn is the first class search platform in Myanmar with tutor matching service that you can browse class and school information at your convenient time All information at one PLACE and request private tutors for languages and other skills. Get Myanmar's best education application now!
© Copyright 2022 by ပညာတတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်